News - Otu esi amata ihe nkpuchi KN95
OA FFP2 NR
Esi amata ọdịiche KN95
Ọ bụ ezie na akwụkwọ coronavirus oria na oru, ahịa usoro iwu ọchịchị na-eji ọkụ na mkpakọrịta na niile etoju akpọwo azụmahịa iguzosi ike n'ezi na-erubere iwu isi. Agbanyeghị, a ka nwere ọtụtụ azụmaahịa na-enweghị ụkpụrụ megide ikuku ma na-ere ihe nkpuchi adịgboroja iji nweta uru na-akwadoghị. Karịsịa mgbe nkpuchi ahụ gbajiri, ọtụtụ ndị enyi ga-echegbu onwe ha na ha nwere ike zụta ihe mkpuchi ụgha, yabụ ugbu a, m na-akọrọ ụfọdụ n'ime ha. Ihe omuma banyere otu esi ekwu ma nkpuchi bu eziokwu ma obu na o bughi.
Ugbu a, nkpuchi coronavirus nkpuchi bụ mkpuchi ịwa ahụ na mkpuchi KN95. Dị ka Associationlọ Ọrụ Ndị Ahịa nke Beijing si kwuo, e nwere usoro nzacha ụzọ atọ maka ihe mkpuchi ịgwọ ọrịa. Mgbe ịzụrụ, ha gosipụtara na YY0469-2011 dị na nkwakọ ngwaahịa ahụ. Ọkọlọtọ nke YY0469-2011 mkpuchi nkpuchi bụ mkpuchi ịwa ahụ ahụike oge niile.
maka ịkpọtụrụ anyị kwa ụbọchị na ihe nkpuchi KN95, Conslọ Ọrụ Ndị Ahịa nke Beijing, yana ihe nkpuchi 3M kachasị ewu ewu, na-enyekwa usoro iji mata ọdịiche dị n'etiti eziokwu na ụgha
Isi: Mkpokọta 3M enweghị isi pụrụ iche, ọ bụ naanị carbon na-arụ ọrụ, nke nwere isi ọkụ nke carbon na-arụ ọrụ, ọ nweghịkwa isi ísì.
2. Lee anya na mbipụta akwụkwọ: mkpụrụedemede niile dị na 3M masks bụ laser ebipụtara, akara nbipute gosipụtagoro akara ugo iri anọ na ise, ebe ndị adịgboroja bụ akwụkwọ ink. Ọzọkwa, ibipụta ink na-edugakarị ink na-enweghị atụ. Kpọsị, nsonaazụ nke ezigbo masks 3M bụ nkewa agbapụ, ebe ndị masks adịgboroja bụ ntụpọ gbara gburugburu. Ọzọkwa, ezigbo nkpuchi na-egosi na ha nwere ike idenye na koodu agba na ngwugwu N'aka nke ọzọ, ngwaahịa adịgboroja enweghị ike.
3. Lee na logo na asambodo: La logo na QS asambodo na-adịghị e biri ebi na igbe, ma nwere abụọ obere aha mmado. Ọ bụrụhaala na a na-ebubata ihe nkpuchi anụ ụlọ, ha ga-enwerịrị asambodo La, ebe ndị masks ụlọ ga-enwerịrị asambodo QS na La.
Dabere na Beijinglọ Ahịa Ahịa Beijing, ndị na-azụ ahịa nwere ike ịkpọ 12315 ka ha kọọrọ ngwongwo adịgboroja. Enwere m olileanya na n’oge a dị egwu nke ntiwapụ nke ọrịa, ndị ọchụnta ego na-enweghị isi nwere ike ichegharị ozugbo enwere ike, ka anyị nwee ike iji oge a pụrụ iche chebe onwe anyị.
Ihe ncheta Yirentang nkpuchi:
Maka ndị mmadụ nkịtị, ọ kacha dị irè ikwe ka nkpuchi N95 pere mpe gaa n'ọgbọ agha n'ihu ma hụ na nchekwa nke ndị ọrụ ahụike, nke dị irè karịa ịkpa ihe mkpuchi na onwe ha. Ọzọkwa, ka ị na-adị njikere maka ịlụ ọgụ n'ihu, ka ọ na-atọkarị ndị ahịa nkịtị ịzụta ihe nkpuchi.
Nrụpụta nke nkpuchi N95
ọgụ virus bu agha sayensi. Anyị ndị nkịtị ekwesịghị naanị ichebe onwe anyị, kamakwa enyeghị obodo nsogbu. Anyị kwesịrị ịgbalị ike anyị niile ịpụ dịka iwu obodo siri dị. Anyị kwesịrị ime ihe nchebe mgbe anyị na-apụ. Anyị nwere olile anya na ọrịa a ga-agafe ozugbo enwere ike. Anyị nwere olile anya na ndị ọrụ ahụike ga - echebe onwe anyị.
Kunshan Gubang Nchebe akụrụngwa Technology Co., Ltd.Adreesị: Owuwu 13, No.169 Shimeng Road, Qiandeng Town, Kunshan City, Jiangsu, China
Tel / Faksị: 0086-512-57576086